अब कति पाउँछन् मुख्यमन्त्रीले तलब सुविधा ? « News of Nepal
अब कति पाउँछन् मुख्यमन्त्रीले तलब सुविधा ?
काठमाडौं । नयाँ संविधानले तीन तहको राज्य संरचना परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको अभ्यास यसअघिका निर्वाचनमा गरिए पनि मुलुक पहिलो पटक प्रदेशिक संरचनामा जाँदैछ। आज सम्पन्न हुने निर्वाचनले सो संरचनालाई विधिवत् रुपमा संस्थागत गर्नेछ। स्थानीय तहसँगै केन्द्र सरकारको अभ्यास गरिरहेको नेपाल अब प्रदेश सरकारको समेत कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।